मधुमेह (सुगर) रोगका बिरामीले दशैमा कस्तो मासु खाने ? - Enepalese.com
मधुमेह (सुगर) रोगका बिरामीले दशैमा कस्तो मासु खाने ?
इनेप्लिज २०७६ असोज १७ गते ११:२४ मा प्रकाशित
नेपालीहरुको महान् चाड बिजया दशमी घर आगनमा आइरहेको छ । दशैमा बिशेषत मासुको परिकार बढी बिक्छ, खाईन्छ । सामान्यतया अरु बेला भन्दा बढी मासु खाईने र यसले बिरामी पार्ने वा बिरामी भएहरुलाई समस्या निम्ताउन सक्छ ।
मधुमेह, थाईराईड, क्लोरोष्ट्रोल, प्रेसरका बिरामी नेपाली समाजमा धेरै देखिने बिरामी हुन् । मासुका कारण बिभिन्न रोग बढ्न सक्छन् भने नलागेका रोगहरु पनि लाग्न सक्छन् । दशैको बेला कति मासु र कस्तो प्रकारको मासु खान उपयुक्त हुन्छ ? हामीले यस बिषयमा बरिष्ठ मधुमेह, थाईराईड तथा हर्मोन रोग बिशेषज्ञ डा. तिर्थलाला उपाध्यायसंग कुराकानी गरेका छौं